LIVE Nhepfenyuro huno 19.00: Derbymatch Holms SK – Kovlands IF | Holmbygden.se
Posted on 18 Chivabvu, 2016 kubudikidza Holmbygden.se
Match of Day Live! Ivai nechokwadi chekuti hwakanakisisa ari giya pasi kurudyi. Kana chipi michina matambudziko, edza panzvimbo kutepfenyurwa zvakananga kubatanidza pazasi.
manheru ano 19:00 wakapata “Nordvästras El Clásico” pana Holm Vallen pamwe chaiwo Derby tinosangana pakati Holm SK – Kovlands IF. The mutambo aifarira senguva dzose, zvakanaka pamusoro-nzvimbo ine nokuipisa noutsi hwemvura kapu kuJava uye soseji kana burger kubva kiosk.
Holmbygden.se livesänder matchen. Nokuti vaya vasingadaro havagoni kupinda nayo panguva iyi yakatarwa vårdrabbning, enda mutambo Zvakanakawo kuona nzvimbo iyi. kamera Just pamberi mutambo Rigging vemo wenhau Fredrik Wikholm kuitwawo mutambo kutepfenyurwa pamwe nyanzvi rinotsanangura uye nhau mumusasa HSK.
Lineup, enzana zviziviso uye zvabuda, rugwaro mumwe mutambo vakasununguka pano!
Manheru kuti Rwizi (“midzi” nechepamusoro): https://www.youtube.com/watch?v=CniAUdOSnXo
HSK:kubudikidza Youtube-Channel: holmssk.se/youtube
Last Derby, ndangariro svärd Holm Seger! Last HSK akagamuchira Kovland pa Holm Vallen akanga makore matatu apfuura muna May 2013 mu DM-Shocker, kuti mushure 3-3 mubasa renguva yakazara akakwira chirango shootout. 6-4 kuguma mugumisiro sezvo, pashure inonakidza pamangange pamberi grandstand.
Ona zvizere mutongo davi kumusoro wekupedzisira pamisangano Holm Vallen pakati Holm SK – Kovlands IF.